जोसे क्याल्भो पोयाटो। La travesía Final | को लेखकसँग अन्तर्वार्ता वर्तमान साहित्य
फोटोग्राफी: जोसे क्याल्भो पोयाटो। (c) पेपे ट्राभसिया। सौजन्य Ingenio डी Comunicaciones।
जोसे क्याल्भो पोयाटो लोकप्रिय ऐतिहासिक रचनाहरूको लेखकको रूपमा र उपन्यासकारका रूपमा लामो क्यारियर छ, जसको शीर्षकहरू मध्ये एक हो राजाको जादू, म्याड्रिडमा संयोजन ब्ल्याक बाइबल, द ड्र्यागन लेडी o हाइपाटियाको सपना, अरु मध्ये। यसमा बिताएको समयको लागि धेरै धेरै धन्यबाद साक्षात्कार जहाँ उनले हामीलाई उनको पछिल्लो उपन्यासको बारेमा बताउँदछन्, अन्तिम यात्रा, र थप शीर्षकहरूमा।
जोसे क्याल्भो पोयाटो - अन्तर्वार्ता
साहित्य समाचार: तपाईंले भर्खर भर्खर मार्केटमा नयाँ उपन्यास प्रकाशित गर्नुभयो, अन्तिम यात्रा। तपाईं हामीलाई यसमा के भन्नुहुन्छ?
अन्तिम यात्रा हो, एक तरिकामा, क असीम मार्गको निरन्तरता, जसमा यो गणना गरिएको थियो जुआन सेबास्टियन एल्कानोद्वारा विश्वको पहिलो चरण. अहिले, गेटेरियामा जन्म भएको स्पेनिश नाविक, जुन उपन्यासको केन्द्र बन्छ यो उसलाई के भएको थियो भनिएको छपहिलो पटक विश्व भ्रमण गरिसकेपछि, किनकि एल्कानो इतिहास पुस्तिकाबाट हराउँदछ र चरित्र उसको लागि के भयो भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुन्छ। यसमा थप्नुहोस् कि ती वर्षहरू पहिलो चरण अनुसरण गर्दै हाम्रो इतिहासमा महान घटनाहरूले भरिएका थिए।
AL: के तपाईं पहिलो पटक पढ्नु भएको पुस्तकको मेमोरीमा जान सक्नुहुन्छ? र तपाईले पहिलो कथा लेख्नुभयो?
मैले पढेको पहिलो पुस्तक थियो धर्मयुद्धको इतिहास। यो सम्पादकीय ब्रुगुएराको पुस्तकहरू मध्ये एक थियो जसमा पाठ हास्यसँग जोडिएको थियो। कमिक पहिले पढिएको थियो। कहिलेकाँही केवल कमिक। हामी सात वा आठ बर्षको बच्चाहरु थिए। मेरो विचारमा उनीहरूले यो मलाई दिए जब म पहिलो कुराकानी गर्‍यो, म अझै सात बर्षको भएँ।
मैले लेखेको पहिलो कथा र त्यो पुस्तक मेरो शहरमा सत्रहौं शताब्दीको संकट मा एक ऐतिहासिक अध्ययन थियो: विला डी क्याबरामा सत्रौं शताब्दीको संकट। यसले एक पुरस्कार जित्यो र त्यसैले यो प्रकाशित भयो। त्यस पछि केहि बर्ष भयो।
मलाई याद छ उनीहरूले मलाई प्रभावित पारे, किशोरावस्थामा, मार्टिन Vigil को पुस्तकहरु, कसरी जीवन भेट्छ। ती पनि अधिकतम भ्यान डेर मीरश, को रूपमा शरीर र आत्मा! एक इतिहासकारको रूपमा, मलाई याद छ कि एक गर्मीमा मैले सबै पढें राष्ट्रीय एपिसोडहरू गल्डेस को। म प्रभावित भएँ। मलाई लाग्छ कि त्यो पठन निर्णायक प्रभाव que म एक इतिहासकार हुन समाप्त भयो र म ऐतिहासिक उपन्यास को लागी भावुक थिए। त्यस समयमा यो मेरो दिमागमा कहिल्यै पस्न सकेन कि एकदिन म ती लेख्ने एक हुँ।
मैले पहिले नै डन बेनिटो पेरेज गल्डेसले के सोचें भनेर उल्लेख गरेको छु। म बारेमा भावुक छु क्युवेडो र उन्नाइसौं शताब्दी को महान उपन्यासकार को रूपमा Honoré Balzac वा Victor Hugo। हालका लेखकहरूमध्ये, मेरो मनपर्नेहरू हुन् जोस लुइस Corral, ऐतिहासिक उपन्यासको साँचो गुरु। को परीक्षणहरू जुआन एस्लाव गालान र हान्सबर्ग्स र १th औं शताब्दीको स्पेनमा डन एन्टोनियो डोमेन्गु अर्टिजको कामहरू।
मैडम बोवरी। मलाई लाग्छ कि उहाँ सबै समयको साहित्यको सबैभन्दा उत्कृष्ट चित्रित पात्र हुनुहुन्छ। पछाडि छोडिदैन लाजरसको नायक लाजरिलो डे टोरम्सवा सान्को प्यान्जा। दुबै मलाई उनीहरूको सन्दर्भ र जीवन घटनाहरूको लागि ठूलो लाग्छ।
म प्रायः आफूलाई अलग गर्छु राम्रो राम्रो, मलाई जहाँ लेख्न अनुमति दिँदै त्यहाँ अन्य मानिसहरु च्याट गर्दैछन्। यसैले म प्रायः लेख्छु भान्छामा मेरो घर बाट परिवार भेला केन्द्र। जब म कुनै पाठलाई प्रेसमा पठाउन अन्तिम सुधार गर्दछु, म प्रायः आफूलाई अलग गर्दछु र कुनै रुकावट बिना नै पढ्छु। कहिलेकाँही म लेख्छु - लेखन प्रक्रियाको अन्तिम चरण हो - धेरै हप्ताको लागि र त्यहाँ असंतुलन हुन सक्छ, तालमा परिवर्तनहरू, जुन सुधार गर्नुपर्दछ। त्यसैले म एक्लै र एक्लै बस्न रुचाउँछु।
मैले पहिले नै औंल्याएको छु, म यो कहिँ र अब गर्न सक्दछु मसँग मनपर्ने पलहरू छैनन्। कहिलेकाँही उनी राती लेख्न रुचाउँथे। तर समयसँगै मैले यो निष्कर्ष निकालेको छु लेख्नु पर्छ जब एक सहज, ढीला छ। कहिलेकाँही मानिस लेख्न जोर दिन्छ Writing लेखनको अर्थमा - र विचारहरू प्रवाहित हुँदैनन्। ती क्षणहरूमा यसलाई छोड्नु राम्रो हुन्छ। त्यहाँ कहिलेकाँही कहिले, यसको विपरित, सबै चीज सजीलै आउँदछ र तपाईंले यसको फाइदा लिनुपर्दछ।
ऐतिहासिक उपन्यासहरु बाहेक, म धेरै पढ्छु ऐतिहासिक निबन्ध; आखिर, म एक इतिहासकार हुँ। म पनि पढें कालो उपन्यासदुबै क्लासिक Dasiell प्रकार Hammett वा Vquezquez Montalbán वर्तमान अपराध उपन्यासको रूपमा। धेरै पाठकहरू भन्छन कि मेरा उपन्यासहरूमा सँधै कालो षड्यंत्र रहेको हुन्छ जुन सही ऐतिहासिक नभई व्यावहारिक छ र त्यसैले उपन्यासको ऐतिहासिक ढाँचामा राम्रोसँग फिट छ।
मैले समाप्त गरे एक नर्कमा अनन्तताइरेन भालेजो द्वारा। म पढ्दैछु प्रकाशको हतियार, को सान्चेज अडालिदर बिर्सेकी रानीजोसे लुइस कोरल द्वारा। तपाईं कार्लोस III को जीवनी को लागी प्रतिक्षा गर्दै हुनुहुन्छ। म यसको दोस्रो छमाहीमा स्पानिश १ XNUMX औं शताब्दीको थोरै ज्ञात पक्षहरूको बारेमा जानकारी खोज्दैछु।
हुनसक्छ यो छ हालका वर्षहरुमा अधिक जटिल। २०० 2008 मा शुरू भएको स्कटले पुस्तकहरूको विश्वलाई ठूलो असर गर्यो। धेरै राम्रा लेखकहरू एक प्रकाशक बिना छोडियो। यो धेरै गाह्रो थियो। त्यहाँ हाल छन् धेरै लेखकहरू जससँग प्रकाशनको भ्रम छ, तर सम्भावनाहरू सीमित छन्। डेस्कटप प्रकाशनको सम्भावना छ, तर त्यो अवस्थामा वितरण असफल हुन्छ, जुन आवश्यक छ। यो दुखद कुरा हो कि धेरै कथाहरू, धेरै राम्रो र राम्रोसँग भनिएको छ, प्रकाश नदेख्ने वा यसलाई धेरै सीमित तरीकाले देख्दैनन्।
हामीले अनुभव गरिरहेको महामारीको संकट धेरै गाह्रो भइरहेको छ। केवल मृतक र बिरामीहरूलाई मात्र होईन जो निको हुन गाह्रो समय भइरहेका छन्। साथै किन सीमितता, प्रतिबन्धहरू, अस्थिरता वा धेरै सापेक्ष गतिशीलता समावेश गर्दछ। यो त्यस्तो चीज हो जुन हाम्रो समाजले आशा गरेन। यी महामारीले ग्रहका अन्य भागहरूमा प्रभाव पारे, तर तिनीहरू युरोपमा कुनै समस्या थिएनन्।
मेरो लागि व्यक्तिगत रूपमा, यो सहन योग्य छ। म शहरको घरमा बस्छु - यी परिस्थितिमा सबै लक्जरी - y लेखकको पेशा धेरै एक्लो छयद्यपि म कहिलेकाहीँ लेख्छु, पारिवारिक जमघटको बीचमा। मलाई लाग्छ हामी के भइरहेको छ भन्नेबाट हामी कुनै निष्कर्ष निकाल्न सक्छौं कि जस्तो कि हामीले सोच्यौं भन्दा बढी जोखिमपूर्ण छौं, त्यो lनम्रताको अत्यधिक सिफारिस गरिन्छ वा त्यो धैर्यता, गति र नक्कलले भरिएको समाजमा, यो सुविधाजनक छ कि हामी यसलाई खेती गर्न सिक्छौं।
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » साहित्य » साक्षात्कार » जोसे क्याल्भो पोयाटो। La travesía Final का लेखकसँग अन्तर्वार्ता
ठीक छ, म यस लेखकको कामको खोजी गर्नेछु किनकि मलाई सबैभन्दा मनपर्दो ऐतिहासिक उपन्यास र ईतिहासका पुस्तकहरू हुन्।